Redmi K30 Pro အတွက် အရောင် အသစ် ထွက်မည် – DigitalTimes
Redmi က စွမ်းရည်မြင့် K30 Pro ကို မတ်လက ကြေညာခဲ့ပြီး အဖြူ၊ အပြာ၊ အညိုနဲ့ ခရမ်းရောင်တွေ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အခုတော့ Redmi က အရောင်အသစ် ၁ မျိုးကို ကြေညာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရောင်ကို ကုမ္ပဏီက မပြောသေးပါဘူး။ Redmi က အောက်က Teaser ကို မျှဝေထားပြီး ပင်လယ်ရေ၊ သဲ၊ ကမ်းခြေတွေကို မြင်ရပါတယ်။ ဘာအရောင် ဖြစ်မလဲဆိုတာစာဖတ်သူတို့ ခန့်မှန်းကြည့်ပါဦး။
Redmi K30 Pro ရဲ့ Specs တွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ ၆.၆၇ လက်မ Super AMOLED မျက်နှာပြင်နဲ့ 60Hz Refresh Rate , 180Hz Touch Sampling Rate တွေ ပါလာပါတယ်။ Gorilla Glass5နဲ့ ကာကွယ်ထားပြီး Snapdragon 865 မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ 5G SA/NSA ထောက်ပံ့တဲ့ Snapdragon X55 Modem ပါလာပြီး ဂိမ်းကစားရင် အရမ်းလန်းမယ့် Liquid Cooled Heat Sink , Game Turbo 3.0 နဲ့ 4D Vibration တွေ ထည့်ထားပါတယ်။
ဈေးနှုန်းတွေကို အောက်မှာ လေ့လာပါ။ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး မော်ဒယ်ဟာ ၆ သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။
• Redmi K30 Pro Zoom Edition 8GB + 128GB— 3799 yuan (US$ 536 / Rs. 40,850 approx.)
• Redmi K30 Pro Zoom Edition 8GB+ 256GB — 3999 yuan (US$ 564 / Rs. 43,000 approx.)